Results 11 to 20 of 1002
09-11-2012 07:32 AM #11
ရင်ထဲ ကျလိကျလိ ဖြစ်နေတာလေး လဲဝင်တုပ်ချင်တယ်ဗျာ
တစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး "အသံ" ပါ
စတ်ပစ္စည်း မပြည့်စုံလို့ အသံ ဝူးဝူး ဝါးဝါး ဖြစ် ပြီး ဇတ်ဝင်ခန်း တွေ မှာ အသံမကြားရတာကိုလက်ခံပေးလို့ရပါတယ်
ကျနော် မြင်ပြင်း ကပ် နားကြားပြင်းကပ်တာက မလိုအပ်ပဲ ထည့်ထားတဲ့ တီးလုံးသံ
ဥပမာဗျာ ဟာသကား ဆိုပါတော့ ဟာသတစ်ခုခု ပြောလိုက်ရင် ရူးသလိုလို ပေါသလိုလို နဲ့လိုက်ယောင်ပြောပြီး
အနောက်မှာ တွီ။။။။။။။။။ တွမ်။။။။။။. နဲ့ ဘာလဲဗျာ ဆူညံနေတာပဲ
နောက် ဇတ်လမ်း အရှိန်တတ်နေတုန်း စကားပြောခန်းမှာ တီးလုံးသံတွေဆူညံနေတာ
စကားပြောနဲ့အပြိုင် တီးလုံးသံကလိုက်လု ပြီး ဆူညံနေတာပဲ
အရေးကြီးတဲ့ စကားပြောခန်းဆိုတိတ်ပြီး ပိုပြီး အာရုံတောင်ပို စိုက်မိသေးတယ်
ခုဟာက မဟုတ်ပါဘူး တီးလုံးကတစ်မျိုး နှဲသံကတစ်မျိုး စကားပြောတာ အပြင်မှာမို့လို့ လေတိုးသံတွေနဲ့
akm, barronbala, brokenworld, Chanayephyu, Chit.tat.lun.tu, coolsnow, drizzle, fridayborn, galladino, HlaingKaLayThin, Hollinaz, honelay86, htusitthu, icy, Jim, justkidding, k-pooh, khanhlaing, Komaena, ktg, little caesar, mgmgthan, Min Nanda, MNO.BN, myanmargunner, nail, Ngwe Zinyaw, nomoregirl, palartoo, planetX, robin76, shadow69, silvia, staraye, supernova, THIHA, thudawzingyi, Upendi, zenith83, zero6, zzz
09-11-2012 07:39 AM #12
ပေါချော တစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ပါ တော့မည်။ olaX;BuD;BuD;wpfa,mufom;ESifhygwJh
adaptor, akm, barronbala, brokenworld, Chit.tat.lun.tu, chithninnwai, coolsnow, drizzle, fergusan, fridayborn, galladino, Grace, HlaingKaLayThin, Hollinaz, honelay86, Jim, justkidding, k-pooh, KaungKinPyar, ktg, little caesar, mgmgthan, Mi Soe, MNO.BN, nail, Ngwe Zinyaw, phyo2006, RECEY, shadow69, staraye, THIHA
09-11-2012 07:47 AM #13
ဂန်းဂန်း ပေါချော ဆိုတာ ဘယ်သူ များပါလိမ့်
barronbala, Chit.tat.lun.tu, fergusan, fridayborn, galladino, Grace, HlaingKaLayThin, Hollinaz, honelay86, Jim, justkidding, k-pooh, ktg, little caesar, MNO.BN, myanmargunner, Ngwe Zinyaw, shadow69, staraye, THIHA
09-11-2012 08:04 AM #14
Originally Posted by RECEY
aygacsmqkdwm..... acsm&wemav ... osefxGef;jrefrmpmu tjidrfhwckrSm ol hudkaygacsmqkdjyD; oDcsif;pyfay;ao;w,f... olemrnfajymifxifwmbJ ...
akm, Alintan, AungNN, barronbala, Chit.tat.lun.tu, coolsnow, fergusan, fridayborn, galladino, Grace, Hollinaz, honelay86, Jim, justkidding, k-pooh, khit, Komaena, ktg, little caesar, MNO.BN, myanmargunner, Ngwe Zinyaw, shadow69, staraye, THIHA, yokesoe, zero6, zerperio
Noble Contributor & Ordinary Member Of the Year
This message has been deleted by Mood.
09-12-2012 12:56 PM #15
[ပုဂံ မှာ တုန်း က ကိုကို ကျိန် ပြ ၊ ကတိ တွေ ပေး ခဲ့၊ သစ္စာ ဆို ပြ ခဲ့ တာ တွေ ကြောင့် ကိုကို ကို ပိုး ယုံ ကြည် ပါ တယ်။ မ သက် သာ လို့ သာ အပ် မိန်းမ ရဲ့ မျက်နှာ ကို မ မြင် ချင် ပဲ မြင်နေ ရ တဲ့ ဘဝ ရောက် နေ တဲ့ ကိုကို ရဲ့ အ ဖြစ် ကို လဲ သ နား လို့ မ ဆုံး ပါ ဘူး။ ပုဂံ , ရန်ကုန် နဲ့ပုပ္ပါး က
ဘု ရား တွေ မှာ ကို ကို ခဏ ခဏ ကျိန် ပြ ဖူးတဲ့ အပ် မိန်းမ ကို ချစ် ရင်၊ နမ်းရင်၊ လက် ကိုင် ရင် ၊ ဖက်ရင် ၊ အပ် မိန်းမ
နဲ့ နေ ရင် ကိုကိုတို့ မိ သား စု စော စော စီး စီး သေ ကွဲ ကွဲ ရ ပါ စေ ၊ ကိုကို တို့ တ မိ သား စု လုံး ဒုက္ခ အ ကြီး အ ကျယ် ရောက် ပါ စေ ၊ ကား တိုက် ပြီး သေ ပါ စေ လို့ ဘု ရား မှာ ပိုး ကို ချစ် လို့ ပိုး စိုးပက်စက် ပိုး ကျိန်ခိုင်း တဲ့ အ တိုင်းကျိန် ပြ ခဲ့ တဲ့ ကိုကို ကို နောင် နှစ် ပေါင်း တစ် ရာ တိုင် ယုံ ကြည် သွား မှာ ပါ။ မ ချစ် ပဲ နဲ့ တ အိမ် ထဲ အ တူ တူ နေ နေ ရ တဲ့ လင် မ ယား ၊ လင် မ ယား ကွဲ ချင် ပေ မဲ့ လဲ လူ ကြား ကောင်း အောင် ကွဲ ခွင့် ရ ဖို့ ကို ခ လေး ငယ် လေး ရှိ နေ သေး လို့ ခ လေး နဲ နဲ ကြီး တဲ့ ထိ စောင့် ပြီး နောက် တ နှစ်၊ နှ နှစ် လောက် နေ ရင် ကွဲ ရ တော့ မဲ့ အ စ ထဲ က မ ချစ် ပဲ ယူ သင့် လို့ ယူ ခဲ့ တဲ့ ကိုကို နဲ့ ဘဝ တူ လင် မ ယား တွေ အား လုံး မ ချစ် ပဲ နဲ့ အ ပေါ် ယံ ဟန် ဆောင် မှု တွေ နဲ့ အ တူ တူ နေ နေ ရ တဲ့ ဘ ဝ က မြန် မြန် လွတ် ကင်း ကြပါ စေ။ အ ကျပ် ကိုင် ခံ ထား ရ လို့ တ ရား ဝင် မ ကွဲ ရ သေး ပေ မဲ့ အ တူ မ နေ တာ ကြာ ပြီ ဖြစ်တဲ့ တ ယောက် ကို တ ယောက်လုံးဝ ခံ စား ချက် မ ရှိ တော့ တဲ့လင် မ ယား တွေ ၊ မိဘ က လုံးဝ ပေး မ ကွဲ လို့ သေ လောက် အောင် ကွဲ ချင် ပေ မဲ့ ခ လေး မျက် နှာ ကြောင့် လူ တွေ အ လယ် မှာ တ ယောက် ကို တ ယောက် ဟန် ဆောင် ပေါင်း နေ ရ တဲ့ လင် မ ယား တွေ တ ကယ် ဝဋ် ကြီး ပါ တယ်။ အပ် လို လင် မ ယား မျိုး တွေ မြန်မာ နိုင် ငံ မှာ အ များအပြား ရှိ နေ ပါ တယ်။ ကေ ခိုင် ဦး တို့ လင် မ ယား လို မ ချစ် ပဲ ဟန် ဆောင် ပေါင်း ပြီး အ တွင်း မှာ ကြိတ် ပြီး စိတ် ဆင်းရဲ နေ ရ တဲ့ ဘ ဝ မျိုးဘဝဆက်တိုင်း ဘယ် သူ မှ မ ကြုံ ပါ စေ နဲ့။ ဘယ် သူ မှ လဲ ကြုံ ချင် မှာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ လူ ဆိုတာ မျိုး က အ သက် ၃၀ ကျော် မှ သုံးဆယ့်လေး ၊ ၃၅ လောက် ကျ မှ လဲ အ ချစ် စစ် ကို ရှာ ဖွေ တွေ့ ရှိ သွား တတ် တာ မျိုး လေ။ အ ရင် တွေ့ တဲ့ သူ က မှ အ ချစ် စစ် မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ နောက် မှ တွေ့ တဲ့ သူ ကို လဲ အ တွေ့ နောက် ကျ ခဲ့ ပေ မဲ့ တ ကယ် ချစ် ရင် အ ချစ် စစ် ပါ ပဲ ................ ]
ဘယ် သူ ခွဲ ခွဲ တို့ မ ကွဲ အ မြဲ စည်း လုံး မည် နော် ကိုကို ရေ.........
ဒီအမျိုးသမီးကို ဘယ်သူမှ မနိုင်ကြတော့ဘူးလားဗျာ ........... မြင်နေရတာ စိတ်လေတယ်
Chit.tat.lun.tu, Emerald Mya, fridayborn, galladino, Grace, HlaingKaLayThin, Hollinaz, htusitthu, Jim, k-pooh, Komaena, MATRIX, MNO.BN, myanmargunner, nail, Ngwe Zinyaw, petit, RECEY, robin76, shadow69, sosawno, staraye, THIHA, ttunlin, winhtaytse, yokesoe, zerperio
09-12-2012 04:11 PM #16
at;aq;aygh ... olu r@yfwdkif wufjyaeNyDqdkawmh .. [dkwpfaumifawmh em;um;aeavmufNyD ...
'gxuf rdk;av;u taumifao;w,fxifwm rao;bl;As ... MCC rSm udk,fawGU ... Avu uRefawmfhavmufeD;eD;awmifhw,f ... aemufydkif;uawmh twkBuD;vm;awmh rodbl; .. [JAD;BuD; .. [dk*RefvGifqdkwJh iwBuD;vkyfwmeJY armifoD[ ... rkd;av;eJY 'Hkywfwlwl&dkufzdkY tcGifhta&; vufvGwfoGm;&Smw,f .. cdcd
akm, BH, Chit.tat.lun.tu, fergusan, fridayborn, galladino, Grace, HlaingKaLayThin, Jim, jim beam, Jin_kaleat, k-pooh, khanhlaing, MATRIX, mgmgthan, MNO.BN, myanmargunner, orjawlan, shadow69, staraye, tharpu, thatonthu, THIHA, TUN2N, yokesoe, zerperio
09-12-2012 04:45 PM #17
at;aemf... &SvGwf... 0rf;enf;vdkY usvmwJY nuf&nfawGudk okwfypf&if; ESyf&SHKUvdkufwmyg..
bmyJ ajymajym rdk;av; udk wcgwnf; aMuGoGm;w,f...
tJYnu tdyfa&;awGawmif ysufvdkY.. cpfcpf
akm, Chit.tat.lun.tu, coolsnow, fergusan, fridayborn, galladino, Grace, Hollinaz, htusitthu, jim beam, Jin_kaleat, k-pooh, khanhlaing, ktg, little caesar, mgmgthan, Mi Soe, MNO.BN, myanmargunner, Oscar Htun, shadow69, staraye, tharpu, thatonthu, TUN2N, yokesoe, zerperio
09-13-2012 01:26 AM #18
zsm;..zsm;..zsm;/ OD;OD;ruf&,f? tomvkyfyg/
yGJrSmvlenf;aew,fqdkvdkU olUudkxnfhvdkuf&wmygAsm/ bk&m;ay;ay;? usrf;ay;ay;yg/
tckawmhvJat;&mat;aMumif; bef;ausmfjyefa&mufoGm;ygNyD/ awmfygao;&JU/
badinf, barronbala, batoe, Botazan, Chit.tat.lun.tu, coolsnow, fergusan, fridayborn, galladino, GwanSein, Hollinaz, jim beam, k-pooh, ktg, little caesar, MATRIX, mgmgthan, Mi Soe, MNO.BN, myanmargunner, Ngwe Zinyaw, nickybuddy, primerking, sai naw, shadow69, staraye, tharpu, ThunderHawk, TUN2N, yokesoe, zerperio
09-13-2012 02:19 AM #19
rdk;av;udk txif parmvdkY ykZGefqdwfuav; b,fvdki,fi,f yifv,f ul;wwfygw,faemf [Gif;;;
The Best of Melody World 2010
vdkufcf&dI; Munfhjzpfw,f/ taumif;qHk; tBudKufqHk;onf yxrqk &oGm;wJh NzdK;jynfhpHkESifh wwd,qk&Sif vDvDjrifhyg/ vDvDjrifh toH awmfawmf aumif;w,f acsmpkcifvdkrsdK; toHatmifw,f vDpl; wdkif;&if;olwJh/ usefwm olrom udk,ftokb nDwl nDrQ &dSMuw,f? 'DwpfESpf twGJnDMuw,f? vli,fawG rsm;w,f/ ygazmfrefY 'efYZmawGeJY azsmfajzMuwm awGU&w,f oDcsif; trsmBuD; oDqdkMuw,f? pHkwGJ oDcsif;a&myJ tcsif;csif; vSnfhywf oDqdkMuw,f/ tzGJUvdkufoDcsif; Gruop Song vnf; rdkufw,f/
ykvJpifwmrsm; &Da0,HeJY armf',fvf wpfa,mufyg? tJaumifrav; b,folvJ rodbl; acsmw,f pum; awmfawmf ajymwwfw,f/ trsdK;orD; ykvJpifwmrsm; a&Auúm0if;? ZifZifaZmfjrifh? r,fvdk'D pojzifh cPcP ajymif;aeaomfjim; &Da0,Hus rajymif;vJbJ tckxufxd yifwdkif/ 'gayr,fh oaumifhom; pum; rajymwwfwm cufw,f? r,fvdk'Da0gvfrSm ykvJpifwm vkyfaewm 4? 5ESpfavmuf &dSNyDaygh? pum;udk tqifacsmatmif rajymwwfao;bl;? 'Hk;&ifu 'Hk;&ifyJ xl;jcm;rvmbl;/ MunfhcsifvQif 'DrSmyg ....
ausmfausmfAdk? rdk;,kpH ESifh ZmwfydkYZmwf&ef cdkifcdkifeJY Zmwfvrf;udk aoaocsmcsm &dkuful;xm;w,f t0wftpm;u tpaygh/ bdwfuvmwJh iHjym&nf&JUom; jynf[def;oD[ yHkazmfxm;wmyg/ a&S;a&S;acwf eef;wGif; t0wftpm; tqift,OfeJY wpfrsdK; xl;jcm;aew,f/ rif;om;? rif;orD; a&G;jc,fwm awmfw,f ajym&ygr,f Zmwfvrf;eJY vdkufatmif Zmwfrif;om; ausmfausmfAdkeJY eef;qef jrefrmqefwJh rdk;,kpHwdkYudk oHk;xm;w,f/ rdk;av;qdk acsmovm; vSovm; rar;eJY pkzk&m;vwfxuf tyHkBuD; omw,f? yHkrajymbl; *,f MunfhcsifvQif 'DrSmyg ....
adaptor, akm, Chit.tat.lun.tu, drizzle, fergusan, galladino, GwanSein, Hollinaz, Jim, k-pooh, ktg, little caesar, mgmgthan, Mi Soe, MNO.BN, myanmargunner, Ngwe Zinyaw, robin76, shadow69, staraye, Tawthumalay, tharpu, TUN2N, yokesoe, zani
09-13-2012 02:53 AM #20
Noble Contributor Senior Cupid Never Give-up
Thanked 16,580 Times in 538 Posts
ဂန်းနား ..အဲဒီပေါချာ..အဲ.. ပေါချောက ..ဟို.. စကားဆက်တောက်..ဆက်တောက်ပြောတဲ့.. မင်းသား..တောအောင်နဲ့ မဟုတ်ဘူးလား။ ..ဟိုတစ်ခေါက် အကယ်ဒမီပွဲသွားတုန်းက ဂျာနယ်တစ်စောင်က.သူတို့ ၂ယောက်ကို သူတို့ဟိုတယ်အခန်းမှာ သွားရိုက်ရတယ်လို့ ရေးထားသလို.. အခမ်းအနားတက်လာတော့လည်း ၂ ယောက်အတူတူပဲ။ ..ခု သူဌေးကြီးကြီးတစ်ယောက်သားဆိုတာ တခြားတစ်ယောက်လား..သူလား..ဟိုလား
akm, Chit.tat.lun.tu, fergusan, fridayborn, galladino, Hollinaz, Jim, k-pooh, ktg, little caesar, mgmgthan, Mi Soe, MNO.BN, myanmargunner, Ngwe Zinyaw, shadow69, staraye, thatonthu, TUN2N, yokesoe